Yakasimudzwa Xenon Disinfection
UV Photocatalyst Mhepo Inobvisa
Mhepo Sterilization Chiteshi
Pulsed Chiedza Disinfection Chamber
Zviratidzo! Iyo inoverengeka coronavirus inogona kuurayiwa nemagetsi eultraviolet muma30s. 99.9%
ne admin pane 20-12-11
Iyo inoverengeka coronavirus (COVID-19) yakabudirira kuurawa mumakumi matatu neSeoul Viosys uye SETi muSeoul, Korea, ichangobva kuziviswa naVioleds SETi. Iyo inoverengeka coronavirus pneumonia kurapwa chirongwa (kutongwa vhezheni 7) yakaburitswawo neNational Health Council uye yakaratidza kuti ultraviolet mwaranzi inogona ...
Zviratidzo! Pulse disinfection robhoti inogona kusamisa coronavirus nyowani
Iyo nyowani coronavirus yatekeshera pasirese, izvo zvinotyisidzira zvakanyanya kuchengetedzeka uye hutano hwevanhu. Pamusoro pechinyakare disinfection, pane imwe inokurumidza uye inoshanda nzira yekuuraya iyo nyowani coronavirus? Pulse disinfection tekinoroji yakaratidza kuti inokwanisa kuuraya MRSA ...
Ongororo ichangoburwa: iyo nyowani coronavirus inogona kurarama pachiso chemask kwemazuva manomwe! Disinfection yemazuva ese yakakosha
Iyo inoverengeka coronavirus yakaburitswa pane lancet neStability yeSARS-CoV-2 mune akasiyana mamiriro ezvakatipoteredza nguva pfupi yadarika. Bepa rinoratidza kuti nguva yekupona kweiyo coronavirus nyowani inogona kusvika kusvika mazuva manomwe kunze kwemasikisi, uye hutachiona hwakagadzikana pamhando dzakasiyana dzePH pamhepo tembiricha ...
Kambani: Shenzhen Doneax Science uye Technology Co., Ltd.
Zvikamu Shanghai Kenjun Robot Tech Co., Ltd.
Kero: Industrial Road, Shilong Nharaunda, Shiyan Street, Baoan Dunhu, Shenzhen
Runhare: 0086 18013988586
Runhare: 0086 18556920268